Sheekooyin – Kaasho Maanka
Tuug khamiis xidhay!
W/Q: Cabdirashiid Ismaaciil
Qaybta: Sheeko Faneed
Wakhti iyo jawi dagan ayaanu wada qaadanay aniga iyo asxaabtaydu. Si fiicanna waanu u wada cawaynay. 10;00 habeenimo ayay noqotay waanu kala hoyanay Habeen-kaa kaligay ayaan ku ahaa xaafadda cidi ilamay joogin. Gurigii soo galay qol-kaygiina iska hagaajistay. Waanan jiif-saday Waa Habeen saqdhexe iyo gudcur madaw waliba roob jiro.
Ijaabo (Sheeko Faneed)
W/Q: Maxamed Kaahiye
Ijaabo waa inan jamaal, joog iyo haybad-ba isku darsatay. Waa inan buuxsantay oo gashaanti ah, markaas-na inta is wada gaadhay isu aragtay in ay dumarkaba kaw; dhanka quruxda, qaabka, toolmoonaanta, jalaqsanida, heemaalka iyo haybadda iyadu u tahay. kalsoonida ay isu qabtay waxa ay gaarsiisay in iyada mooyaan'e inta gabadh la lood ama fac ah aysan jirin inan kula tartami karta quruxda iyo...
W/Q: Ibraahim-Hawd Yuusuf
Ilaa saaka markii uu toosay dhiig baa afka uga dhadhamayey. Markii hore wuxuu mooday in uu afka ka dhiigayo dhawr jeer ayuuna candhuuf iska soo muudiyey oo eegay dhiigse kuma uu arag, haddana waxaad mooddaa in uu xinjiro afka ku sito. Wuxuu ka fekeray goorta iyo waxa uu dareenkaasi ka soo raacay, wuuse xasuusan kari waayey. Wuxuu isku dayey in uu is illawsiiyo laakiin ma ahayn wax uu is illawsiin...
Falsafadda Hinduuga ee dib u dhalashada (Sheeko)
Qaybta: Diinta Hinduuska, Sheekooyin
Qoraaga Reer Maraykan ee Andy Weir ayaa qoray 2009-kii sheeko dhakafaar lahayd, kuna salaysnayd falsefadda Hinduuga ee “dib u dhalashada.” Inkasta oo sheekadu dheerayd waxaan isku dayi doonaa in aan soo koobo.
Aroor Maroodi iyo Itaal Atoor
Bishu waa April Saacaduna waa labadii duhurnimo qoraxdu waa kulayl daran, hayeeshee waxaa fadhiya Harada ama ceegaaga biyo uu dhigay roobkii guga. Darka Harada waxaa taagan raxan Sagaaro ah oo Harada ka cabtay waxay la tahay sagaarada oo uu madax u yahay Atoor lagu magacaabo geeswayne in ay ayagu leeyihiin Harada oo dad iyo duunyaba aysan dul imaan,. hadii ay saas dhacdana Geeswayne wuxuu diyaar...
Kulankii aniga iyo Ilaahay
W/Q: Kaahiye Garaad
axa u gu badan ee aan ku hamminayey waxay in aan Ilaahay la hadlo! Markii ay soo billatay bishii Ramadaan ayaan naftayda kula hasaaway, oo maad isku daydid iminka?. Waxaan is weydiiyey su’aal ah: horta kuwii Ilaahay la kulmay qaabkoodu sidee ahaa iyo la kulankoodu?. Waxay hore loo yidhi, “Ilaahay waxa uu jecelyahay in kulanku ka dhaco buur dusheed” Waayo, Ilaahay waxa ay Muuse...
Daruurow iyo Alshabaab
Magaciisu waa Daruurow oo goortii uu muslimay ma uu garanayo ee sida ay muslimiintu u badan yihiin isaga oo muslim ah buu caqlisaday, tuuladii uu ku garaadsadeyna ma lahayn iskuul aan ahayn malcaamad. Soomaalidu dugsiga Qur’aanka iskuul u ma yaqaanniin, laakiin caalamka meelo badan iskuul baa looga yaqaan, waayo qofkii ka soo baxaa isaga oo wax qori kara, waxna akhriyi kara ayuu ka qalin jebiyaa.
Aniga iyo Qabyaaladda!
W/Q: Cabdikariin Shardi
Waan ku salaamay qabyaaladeey. War horta salaanteyda ma maqleysaa? Dhago iyo af ma leedahay? Qabiilkaagu waa kuma? Qolamaa tahay qabyaalad quruneey? Koleey cadaawadda innaga dhaxeyso baan ogahay iga qaadi meeysid salaanta. Aniguse dan iyo xaajo kama lihi. Muddo baan goobayey nooca aad tahay. Sida aad u taal. Qaabka aad dadkeyga colaadda ugu dhex huriso. Feyruska ku sababo nociisa. Lakiin waan ku...
Marka hore waan ku salaamay. Waxa aan hadda ku fadhiyaa kursiga aad igu fadhiisisay. Waxaan gacanta ku hayaa qalinka aad ii dhiibtay. Waxa aan xidhanahay suudka aad sababteeda laheyd in aan xidhto. Xafiis seddex mitir ah baan ka soo dhex salaamayaa. Waa xafiiski aad adiga i geysay, lakiin miyaad iga qaadan kartaa? Xaasha. Waa hanti aad i amaahisay, lakiin aad dib iiga dhigtay sida wax aan...
Soohan (Sheeko faneed)
W/Q: Cabdifataax Xasan-Barawaani
Qaybta: Sheeko Faneed, Xulka
Dhul carro san ah misena bilicsan laguna jiro xilligii gu’ga oo aan muddo dhawr sitimaan ah roobku kala qaadin. Xareeddu kob kastaba wadhan tahay, naftu u muhanayso, ishuna aanay ka libiqsanayn mar qudha, ceel kastana uu biyo la heed-heetinayo. Soohan deegaankan Awaare ee sidaas u bilicsan ayaa ay ku dhalatay xilli barqo ah oo gu’ ah, roob geel dooje ahina uu da’ayo ayaa ay ifka timid. Hooyadii...
1 2 3 Bogga Xiga